Araka ny hita amin'ny sary, tsy nisy toerana afaka nanavotan'ireo namoy ny ainy fa tsy maintsy niandry izay nidona na dia efa nahita fiara norimorimo aza. Efa nampitaraina ny mponina hatrany amboalohany io famefena sisin-dalana io raha ny fanazavan'izy ireo saingy tsy nisy mpihaino ka izao nitera-doza izao.
Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny BMHS nanao ny asany ary efa nentin'ny fianakaviana ny razana.
Tato anatin'ny roa andro izao dia lozam-pifamoivoizana telo samihafa no niseho teto Mahajanga izay namoizana ain'olona efatra. Omaly tolakandro mantsy nisy raim-pianakaviana iray maty nodomin'ny bus teo amin'ny Sotema, ary omaly alina ihany koa, rangahy iray no maty nianjera tamin'ny Moto teny Ambalavola raha izy nandeha mafy iny no sendra nisy lalan-dratsy tampoka ka niala izany ity farany.